MUUSE BIIXI yaa ku riday shirqoolka calaamiga ah? - Caasimada Online
Home Maqaalo MUUSE BIIXI yaa ku riday shirqoolka calaamiga ah?
By Burhan H. Rooble iyo Cabdulqaadir Cariif Qaasim
Dhowr toddobaad ka hor ayaa madaxda Soomaaliya iyo Somaliland ku kulmeen magaaladda Jabuuti tillaabadaas oo u muuqatay in siyaasiyiinta Soomaalidu (koonfur iyo waqooyiba) gaareen bisayl siyaasadeed oo ay kaga gudbi karaan ismarinwaaga u dhaxeeyey soddonkii sanadood oo la soo dhaafay. Balse arrinku waxuu u muuqdaa “La mood, noqonse weyday!” sida uu qoray Saciid Cabdisalaam.